Archive du 20180213
Marc Ravalomanana Hampiadiana amin`ny Foloalindahy
Mitohy sy miha avo lenta hatrany ny teti-dratsy hanimbana ny ho avy politikan’i Marc Ravalomanana. Atao avokoa ny fanapotehana sy fanagiazana ny fananany, fanosoram-potaka,… satria efa manakaiky ny fifidianana. Kotrehina indray ankehitriny ny fanamafisana ny fampiadiana azy amin`ny Foloalindahy, izay efa natomboka tamin’ny fanonganam-panjakana tamlin’ny 2009.
Fahadisoan’ny tarehimarika sy tsipelina Fanombohana ny halatra amin’ny fifidianana !
Niteraka resabe ny fivoahan’ny sorabola midangana mikasika ny tsenam-panjakana tamin’ny taona 2016 nivoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Sampandraharaha misahana izany dia ny ARMP. Voasoratra fa 158 261 323 819,40Ar ny filan’ny Hopitaly CHU ao Tambohobe Fianarantsoa, 7 186 000 000Ar vidina piesy sy saran’ny fikojakojana ny fiaran’ny DPSP ao amin’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka …
Kandida atahoran’ny fanjakana Tsy avela hampiditra angidim-by…
Miala any indray ny tetika maloto hafa hanomezana tombondahiny hatrany ny kandidam-panjakana amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Re mantsy izao fa mety hatao lalàna ny tsy fahafahana mampiditra angidim-by na fiaramanidina kely avy any ivelany hampiasaina amin’ny propagandy.
Miarahaba ry Jean ! Ela lesy izany le ! Oay, azafady, elaela tompoko tsy tafaresaka an-tsoratra isika.
Fandrobana sy famotehana fotodrafitrasa Mandrava efa toy ny voalavo ny Malagasy !
Mandrava efa toy ny voalavo no ataon’ny Malagasy sasany ankehitriny. Tsy mba manana toe-tsaina tia sy miaro ny fananana iombonana fa dia ny hangalatra sy ny hanimba no masaka an-tsaina.
Reniranon’Ikopa Nahitana razana 4 tao anatin’ny iray andro
Fatin-dehilahy roa omaly maraina no indray hita natsingevan’ny ranon’Ikopa teny Ampasika. Ireo fokonolona teny an-toerana no nahita ny razana niparitaka sy efa nohanin’ny masoandro vao maraina teny an-toerana ka nampandre avy hatrany ny tompon’andraikitra.
Niteraka resabe ny fivoahan’ny sorabola midangana mikasika ny tsenam-panjakana tamin’ny taona 2016 nivoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Sampandraharaha misahana izany dia ny ARMP.
Tsenan’i Sabotsy Mahitsy Tsy manaiky lembenana ireo vahoaka
Manoloana ny trangan-javatra misy eny amin’ny tsenan’i Sabotsy Mahitsy RN 4 ka ketrehan’ny filankevitra kaominaly miaraka amin’ny ben’ny tanàna ny hananganana pavillon maromaro eo amin’ny lalana miditra ao amin’ity tsena ity dia tsy manaiky lembenana amin’ny antsojay mahazo azy izy ireo sy ny lehiben’ny tsena am-perinasa intsony ireo vahoaka mpividy sy mpivarotra ao amin’ny tsenan’i Mahitsy.
Klioban’ny USCAFOOT sy ny IRC Notoloran’ny CUA fitaovana
Tontosa omaly alatsinainy 12 febroary maraina teny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ny fanoloran’ny Kaominina Antananarivo fitaovana ara-panatanjahantena ho an’ny Klioban’ny Uscafoot sy ny IRC (Iarivo Rugby Club), izay samy eo ambany fiahian’ny Kaominina Antananarivo.
Tsipy kanetibe “Star Master Thaillande” Lasan’i Jacky(Vazà) sy Pa ary Hery ny tapakila mankany Bangkok
Tontosa teny Ambohimangakely tamin’ny sabotsy 10 sy alahady 11 febroary teo ny hetsika “Grande Finale” tamin’ny ilay fifaninanana tsipy kanetibe “Qualification 8è Star Master Thaillande de Pétanque”
Fanampiana ara-tsosialy eny ambany tanàna Mitohy ny ezaka ataon’ny fikambanana Fitahina
Mitohy hatrany ny ezaka fanampiana ara-tsosialy fanaon’ny fikambanana Fitahina tarihan-dRtoa Rajaonatahina Bako ho an’ireo mpilalao rugby eny ambany tanàna.
Basket Coupe du Président Ny Cosmos (DIANA) no tompondakan’ny Faritra Avaratra
Ny ekipan’ny Cosmos (DIANA) no tompondakan’ny Faritra Avaratra teo amin’ny fifanintsanana « Coupe du Président » eo amin’ny taranja basikety.
Manompo sa manopa vahoaka
Any Mantasoa indray no hifamotoana ny mpikamban’ny governemanta anio sy rahampitso. Ny raharaham-pirenena sy ny fampandrosoana hatrany aloha no ambara fa hodinihina sy hifampiresahana. Tsy vita etsy Iavoloha sy Ambohitsorohitra intsony ve ny fandinihana ny raharaham-pirenena, ka tsy maintsy handaniam-bola sy hivoahana lavitry ny renivohitra ?
Fifindran’ny taksibrosy eny Andohatapenaka Tsy mitovy hevitra ny ATT sy ny mpitatitra
Tsy mitovy hevitra ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ATT sy ireo mpitatitra mivondrona ao anatin’ny ASTRAM hafindra toerana etsy amin’ny toby fiantsonana vaovao etsy Andohatapenaka.
Andrakaka sy Cap Diego Handroso noho ny ZES, hoy i Freddy Mahazoasy
Hisy ny vela-kevitra faharoa mikasika ny fampiasam-bola stratejika mifandraika amin`ity ZES ao amin`ny faritra DIANA sy SAVA ny 20 ka hatramin`ny 23 febroary eto Antananarivo ary ny 24 sy ny 25 febroary any Antsiranana.
Hisy ny vela-kevitra faharoa mikasika ny fampiasam-bola stratejika mifandraika amin`ity ZES ao amin`ny faritra DIANA sy SAVA ny 20 ka hatramin`ny 23 febroary eto Antananarivo ary ny 24 sy ny 25 febroary any Antsiranana. Hanasana ireo mpamatsy sy mpampiasa vola eto an-toerana sy avy any ivelany.
Fanotorana tany etsy sy eroa Ny vahiny no tena mahazo tombony
Mampametra-panontaniana ny maro ny fanotorana tany maro misy eto Madagasikara amin’izao, indrindra eny amin’ireny lalam-baovao toy ny eny amin’ny faritra Ankazomanga, Ankorondrano, Ankasina (Boulevard de l’Europe), na ny eny amin’ny Marais Masay hatrany amin’ny lalambe vao vita tsy ela dia ny eny Andohatapenaka mankany Ivato iny.
Airtel Madagascar Manohana akaiky ny fampisehoan’i Njakatiana sy Bodo
Hiara-kankalaza ny fetin’ny mpifankatia i Njakatiana sy Bodo ny alahady 18 febroary ho avy izao.
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tany Kasoandray Sambava, ny sabotsy teo. Renim-pianakaviana iray mpivarotra trondro ao an-tampon-tanàna no nisy nanolana ary novonoina avy eo.
Johnny Hallyday Ifandroritan’ireo zanany ny fananany
Niseho masoandro ny fizarazarana eo amin’ny fianakavian’i Johnny Hallyday mahakasika ny didy miafina nataon’ity mpanakanto ity izay nodimandry ny 6 desambra teo momba ny fizarana ny fananany.
Nidangana tampoka ny vidin-jiro Velon-taraina sady tezitra ny vahoaka
Saika tonga manao fanamarihana sy mangata-panazavana manoloana ny fidangan’ny vidin-jiro tampoka tafakatra hatrany amin’ny 80% eny amin’ny masoivohon’ny Jirama ny vahoaka amin’izao, raha tsy hilaza afa-tsy ny teny 67Ha omaly.